Ukukhanyiselwa kuye kwachazwa ngeendlela ezininzi, kodwa ekubanzi kwayo kwakuyi-philosophical, intellectual and culture movement of the seventeenth and eighteenth century. Yagxininisa isizathu, ingcamango, ukugxeka, kunye nenkululeko yokucinga malunga neqhinga, ukholo oluyimfama kunye nenkolelo-ze. I-Logic yayingeyona into entsha, esetyenziswe ngamaGrike asendulo, kodwa ngoku yayibandakanywa kwihlabathi elibonisa ukuba ukuqwalasela okubalulekileyo kunye nokuhlolwa komntu wobomi kunokubonakalisa inyaniso emphakathini uluntu kunye nokuzimela, kunye nommandla wendalo .
Bonke babonwa njengengqiqo kwaye baqondakala. Ukukhanyiswa kwabakho ukuba kukho inzululwazi yomntu nokuba imbali yoluntu yinkqubela phambili, enokuthi iqhutywe ngokucinga okulungileyo.
Ngenxa yoko, uLwazi luye lwaxela ukuba ubomi boluntu kunye nomlingiswa kungaphuculiswa ngokusebenzisa imfundo kunye nesizathu. Indalo yendalo - oko kukuthi, iphela indalo xa kucingwa ukuba ngumatshini osebenzayo - unokutshintshwa kwakhona. Ukukhanya kwale ndlela kwazisa iingcamango zabantu abanomdla ngokuchasene ngqo kunye nezopolitiko kunye nenkolo; aba bacinga baye bachazwa njengengqondo "abagubungela" ngokuqhelekileyo. Baye baphikisana nenkolo ngendlela yezesayensi, ngokuqhelekileyo kunokuba bafune ukukhohlisa. Ukukhanyisa abacinga babefuna ukwenza okungakumbi kunokuqonda, babefuna ukutshintsha, njengoko bekholelwa, ngcono: bacinga ukuba isizathu nesayensi kuya kuphucula ubomi.
Akukho ndawo yokuqala okanye yokuphela kweNkanyiso, ekhokelela kwimisebenzi emininzi ukutsho nje ukuba yinto yeshumi elinesixhenxe neshumi elinesibhozo. Ngokuqinisekileyo, ixesha eliphambili laliqingatha yesibini yekhulu leshumi elinesixhenxe kunye neyeshumi elinesibhozo. Xa iimbali-mlando zinikele ngemihla, ngezinye iimfazwe zesiNgesi kunye nokuhlaziywa ngamanye amaxesha kunikwa njengesiqalo, njengoko babethintele uThomas Hobbes kunye nomsebenzi wezobupolisa (kunye neYurophu).
I-Hobbes yecinga ukuba inkqubo yezopolitiko endala ibenegalelo kwiimfazwe zengxondorha kwaye ifune enye entsha, ngokusekelwe kwimibuzo yenzululwazi yenzululwazi.
Isiphelo sivame ukunikezwa njengokufa kweVoltaire, enye yeenkcukacha ezibalulekileyo zokukhanyisa, okanye ukuqala kweSifuduko seFransi . Oku kudlalwa ukuba kubonakaliswe ukuwa kweNkanyiso, njengoko iinzame zokuvuselela iYurophu ibe yinkqubo enengqiqo kunye neyokulinganisela yawa kwigazi elabulala ababhali abakhokelayo. Kunokwenzeka ukuba sisekho kuKhanya, njengoko sineenzuzo ezininzi zokuphuhliswa kwazo, kodwa ndabona kwakhona ukuba sisekupheleni kwexesha lokukhanyisa. Le mihla ayenzi, ngokwayo, yenze isigwebo sexabiso.
Utshintsho kunye nokuziqonda
Enye ingxaki ekuchazeni ukukhanya kukuba kwakukho ukuhlukana okukhulu kwiimbono ezibangelwa ngabaphambili, kwaye kubalulekile ukuqaphela ukuba baxubushe kwaye baxoxisana nabanye ngeendlela ezifanelekileyo zokucinga nokuqhubeka. Iimbono zokukhanyisa nazo ziyahlukahluka ngokweendawo, kunye nabacingisi bamazwe ahlukeneyo bahamba ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, ukukhangela "isayensi yomntu" kukhokelela abanye abacinga ukuba bafune umzimba we-body ngaphandle komphefumlo, ngelixa ezinye zifuna iimpendulo zendlela umntu acinga ngayo.
Sekunjalo, abanye bazama ukubeka uphuhliso lwentlalo ukusuka kwiphondo elidala, abanye bebejonge uqoqosho kunye nezopolitiko emva kokusebenzisana kwentlalontle.
Oku kusenokuba kukhokelela kubabhali-bhankqalazi abanqwenela ukulahla iilebula Ukukhanyiswa akuyiyo into yokuba abaCatshulwa ngokukhanyisa bawabiza ngexesha labo lokukhanya. Abacinga babekholelwa ukuba babengcono ngokwengqondo kunokuba baninzi babo ontanga, ababesengobumnyama benkolelo, kwaye babefuna 'ukukhanya' ngokucacileyo kunye neembono zabo. Inqaku eliphambili le- Kant leli xesha, "Ngaba ist Aufklärung" ngokwezwi nezwi ithetha ukuba "Yintoni ukukhanya?", Kwaye yayingenye yeempendulo kwiphepha eliye lazama ukulihlawula inkcazo. Ukutshintsha kwengcamango kubonakala njengengxenye yentlangano.
Umkhangeli weNkanyiso yayiyinxalenye yabalobi abaxhamle kakuhle kunye nabacinga ukusuka kulo lonke elaseYurophu nakwiMntla Melika ezaziwa ngokuba yizifilosofi , ezo ziFrentshi zezifilosofi.
Ezi ngcamango ezikhokelayo zakha, zasasaza zaza zaxubusha ngokukhanyisa kwimisebenzi kubandakanya, ngokuqinisekileyo ivesi eliphambili lexesha, i- Encyclopédie .
Apho abadumi bexesha bekholelwa ukuba iifosabizi zodwa zithwala i-Lighting thought, ngoku ngoku zivumile ukuba ziyinto nje yesigxina sokwakheka kwengqondo ephakamileyo phakathi kwamacandelo aphezulu naphambili, ebaphendulela eluntwini olutsha. Laba babe ngabaqeqeshi njengamagqwetha kunye nabaphathi, abaphathi beefisi, abafundisi abakhulu baphumelela kwi-aristocracy, kwaye ngaba ngabo bafunde imiqulu eminingi yokubhala ngokukhanyisa, kuquka i- Encyclopédie kwaye baxubusha ukucinga kwabo.
Inguqulelo yesayensi yenkulungwane yeshumi elinesibhozo yatshatyalalisa inkqubo yokudala yokucinga kwaye yavumela ukuba abatsha bavele. Iimfundiso zecawa kunye neBhayibhile, kunye nemisebenzi yendalo yakudala yintanda ethandekayo ye -Renaissance , ngokukhawuleza ifunyanwe ilahleka xa isebenzisana nophuhliso lwezenzululwazi. Kwaba yinto ebalulekileyo kwaye inokwenzeka ukuba izazi zefilosofi (Ukukhanyisa ukukhanya) ukuba ziqalise ukusebenzisa iindlela ezintsha zesayensi-apho ukubonwa okubhaliweyo kwaqala ukusetyenziswa kwindalo yendalo-ekufundeni ubuntu ngokwayo ukudala "isayensi yomntu".
Kwakungekho ikhefu elipheleleyo, njengoko abaCatshulwayo bebakhokhelwa kakhulu kwiindawo zokuhlaziya abantu , kodwa babekholelwa ukuba bafumana inguqu enkulu kwiingcamango zangaphambili. Umlando uRoy Porter uye wachaza ukuba oko kwenzeni kwenzeka ngexesha loKhanya kwaba kukuba i-myths yobuKristu eyathatha indawo yatshintshwa ngabantu abatsha bezesayensi.
Kukho into eninzi ekuthethwa ngalo kwesi sigqibo, kwaye ukuhlolwa kwindlela isayensi isetyenziswe ngabavakalisi kubonakala ngathi iyayixhasa kakhulu, nangona isiphetho esinzima kakhulu.
Ngokubanzi, abacatshulwa ngokukhanyisa baxela inkululeko yokucinga, inkolo kunye nezopolitiki. Iifilosofi zazigxininisa abalawuli baseYurophu, ikakhulukazi urhulumente waseFransi, kodwa kwakungekho ukufana okufanayo: uVoltaire, umgxeki wesithsaba saseFransi, wachitha ixesha enkundleni kaFrederick II wasePrussia, ngoxa uWiderot waya eRussia ukuba asebenze kunye Catherine Catherine; bobabini bashiya ukuphazamiseka. URousseau ukhange ukugxeka, ngakumbi ukususela kwiMfazwe yehlabathi yesi-2, ukuba avele ebizwa ngokuba ngumlawuli wobukhosi. Ngakolunye uhlangothi, inkululeko yayingabantu abaninzi abacatshulwa ngokukhanyisa, ababaninzi ngokuchasene nobuzwe kunye nangakumbi ekuthandweni kwamazwe ngamazwe nakwezinye izizwe.
Iifilosofi zazingqongqo, ngokuqinisekileyo kwanokuba zizondayo, kwiinkonzo ezihlelekile zaseYurophu, ingakumbi iCawa yamaKatolika ababingeleli bayo, ipapa kunye nezenzo zathi zatshutshiswa. Iifilosofi zazingekho, mhlawumbi ezinye izinto ezifana neVoltaire ekupheleni kobomi bakhe, abangakholelwa kuThixo, kuba baninzi babekholelwa kuxoxwa kwizinto ezikhoyo kwindalo yonke, kodwa bahlambalaza ngokubhekiselele kwiimfuneko kunye neengxaki zecawa abaye bahlasela ukuze basebenzise umlingo kunye neenkolelo. Abaninzi abakhanyayo bacinga ukuhlakulela ukuhlonela uThixo kwaye abaninzi bakholelwa ukuba inkolo yenza iinkonzo ezisebenzayo.
Eneneni abanye, njengoRousseau, babenokwenene, kwaye abanye, njengoLike, basebenze uhlobo olutsha lobuKristu; abanye baba ngabakhohlisi. Kwakungekho inkolo eyayibavuthayo, kodwa iifom kunye nenkohlakalo zale nkolo.
Ukukhanyiswa kwathintele ezininzi iinkalo zobomi babantu, kuquka nezopolitiko; mhlawumbi imizekelo edume kakhulu yolu hlobo yiSaziso se-Independence sase-United States kunye neSibhengezo saseFransi samaLungelo eNdoda kunye neSizwe. Iziqendu zenguqulelo yesiFrentshi zidla ngokubhekiselele kwiNkcazelo, njengokwamkelwa okanye njengendlela yokuhlasela iifilosofi ngokubhekisela kobundlobongela obufana noBugubungela njengento engayiboniyo. Kukho kwakhona ingxoxo malunga nokuba uLwazi luguqule uluntu oludumileyo ukulufanisa, okanye nokuba luguqulelwe luluntu. Ixesha lokukhanyisa libonela ngokubanzi ukuguqulwa kwecawa kunye nesimo esingokwemvelo, ngokunciphisa inkolelo yokusebenzelana nemimoya, ukuguqulela ngokwenene kweBhayibhile kunye nokuvela kwenkcubeko yabantu jikelele, kwaye "i-intelligentsia" yelizwe inselele abafundisi abaphambili.
Ukukhanyiswa kwekhulu leshumi elinesixhenxe neshumi elinesibhozo ixesha lalandelwa yindlela yokusabela ngayo, i-Romanticism, ibuyele kwiimvakalelo endaweni yokuqonda, kunye ne-counter-Lighting. Kwexesha elithile, ngekhulu leshumi elinesithoba, kwakuqhelekile ukuba iLikhanyiso lihlaselwe njengomsebenzi we-liberal of fantasists, kunye nabagxeki abathi kukho izinto ezininzi ezintle malunga noluntu olungekelwe kwisisombululo. Ingcamango yokukhanyisa nayo yahlaselwa ngenxa yokungagxeki iinkqubo ze-capitalist. Kukho umbandela okhulayo ukuphikisa ukuba iziphumo zoKhanya zikhona nathi, kwisayensi, kwezopolitiko kwaye ngokunyuka kwiimbono zentshonalanga yonqulo, nokuba siseseKukhanyisweni, okanye sithonya kakhulu emva kokukhanyisa, iminyaka. Eminye kwimiphumo yoLwazi. Kukho incike ekutheni nantoni na inkqubela phambili xa ifika kumbali, kodwa uya kufumana ukukhanya kukhange abantu abazimisele ukuyibiza ngokuba yinyathelo eliphambili.
Iso elibi kwi-Islam
Phezulu 'Ii-80 zeengoma zeeNgqungquthela
Iingcebiso zokufumana izazi zeenkwenkwezi
Indlela yokufaka iNqakrazo yeBar Yowonakele
Indlela yokudala, ukusebenzisa, kunye nokuvalwa kwamaFomu eDelphi
I-Mono, i-Fluorocarbon, kunye neLove Fishing Lines